Mexico inofambira mberi mumakwikwi epasi rose |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Mexico inofambira mberi mukukwikwidzana kwepasirese
Mexico inofambira mberi mukukwikwidzana kwepasirese
MEXICO CITY, Mexico - Mexico yakavandudza zvigaro gumi nematatu mumakore maviri apfuura muWorld Economic Forum Global Kukwikwidzana Mushumo. Mexico inosvika makumi mashanu nemashanu mushumo wa13-2, kubva panzvimbo makumi mashanu neshanu mugore ra53 nenzvimbo makumi matanhatu nenomwe muna2012.
Aya maitiro akanaka mukukwikwidza kweMexico anoshamisa, zvichipiwa mamiriro ehupfumi hwepasi rose uye kusava nechokwadi. Kufambira mberi kwezvehupfumi kweMexico kunoratidza kusimba kwehurongwa hweveruzhinji uye kuvimba nekambani yakazvimirira munzvimbo yehupfumi yenyika.
Kukura kwehupfumi hweMexico nekusimudzira yaive nyaya yeiyo ichangoburwa MexicoToday vhidhiyo. Kudzikama kwehupfumi hweMexico nekudyara mudzidzo zvakarumbidzwa nevatungamiriri vanobva kuBombardier, Scotiabank Siemens, neCoca-Cola pamwe naTom Donohue weUS Chamber of Commerce uye aimbova Mumiriri weU.S. Wekutengeserana Carla Hills.
IWorld Economic Forum inoongorora nyika zana nemakumi mana neshanu kuti dzione kukwikwidza kwavo nedhata rakaoma uye ongororo. Nyika dzinoongororwa pambiru gumi nembiri dzekukwikwidza - masangano, zvivakwa, macroeconomic nharaunda, hutano & dzidzo yepuraimari, dzidzo yepamusoro & kudzidziswa, kugona kwemusika wezvinhu, musika wevashandi wemabasa, kusimudzira kwemusika wezvemari, kugadzirira kwetekinoroji, saizi yemusika, hunyanzvi hwebhizinesi uye hunyanzvi.
Mumakore maviri apfuura, Mexico yakatumira kufambira mberi muzvikamu zvipfumbamwe zvezvikamu gumi nezviviri. Izvi zvinosanganisira 12-chinzvimbo chinowedzera mukusimudzira kwemari yemari, uye makumi maviri nematatu nzvimbo mune bhizinesi kuomesa. Chinzvimbo cheMexico mune hunyanzvi chakakwira nzvimbo makumi maviri neshanu mumakore maviri apfuura, uye kugona kwemusika wezvinhu kwakavandudza nzvimbo gumi neshanu. Gore rino, Mexico yakatumira iyo inowanikwa manhamba-mbiri kuwana gumi nemaviri mavara munzvimbo yemusika wevashandi.
Gulfstream G650 inogamuchira mhando chitupa kubva kuFAA
Kuvhura Luxperience kuvhura Muvhuro sekubudirira-kwakatengeswa kubudirira